1 Samoela 30 - Ny Baiboly
1 Samoela toko 30
Ny nandresen'i Davida ny Amalesita.
1Nony tonga tao Sikelega Davida mbamin'ny olony, tamin'ny andro fahatelo, dia efa notafihin'ny Amalesita ny Negeba sy Sikelega: nasiany Sikelega ka nodorany; 2ny vehivavy sy ny olon-drehetra trany tao nobaboiny avokoa, na ny kely na ny lehibe, ary tsy nisy novonoiny izy fa nentiny ho babo dia lasa nandeha izy. 3Nony tonga tao an-tanàna Davida sy ny olony, dia hitany fa voadoro ny tanàna, ary ny vadiny, ny zanany lahy, ny zanany vavy lasan-ko babo. 4Ary samy nanandra-peo nitomany Davida sy ireto olona niaraka taminy, mandra-pahalanin'ny heriny tsy hanatomany intsony. 5Lasan-ko babo mbamin'izy roa vavy, vadin'i Davida, dia Akinoama avy any Jezraela, sy Abigaila avy any Karmela, ilay novinadin'i Nabala.
6Niferin'aina mafy Davida, fa nanao teny hitora-bato azy ny antoko-miaramilany, satria samy nahatsiaro mangidy mafy loatra tao am-pony ny vahoaka noho ny amin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Nefa nampahery ny tenany tamin'ny Tompo Andriamaniny, Davida.
7Hoy Davida tamin'i Abiatara mpisorona zanak'i Abimeleka: Ento aty amiko ny efoda; 8ka nanontany an'ny Tompo Davida nanao hoe: Hanenjika izany jirika izany va aho? Hahatratra azy va aho? Ary hoy ny navaliny: Enjeho, fa hahatratra azy marina tokoa hianao, sady hanafaka. 9Dia niainga Davida sy izy enin-jato lahy izay niaraka taminy. Nony tonga teo amin'ny ranon-driaka Besora izy ireo, dia niato ny mpitaredretra tamin'izy ireo. 10Nanohy ny dia fanenjehany niaraka tamin'ny efa-jato lahy Davida, fa ny roan-jato lahy nijanona noho izy efa reraka tsy nahatafita ny ranon-driaka Besora.
11Ary nahita lehilahy Ejipsiana anankiray tany an-tsaha izy ireo ka nentiny tao amin'i Davida. Ary nomeny mofo izy dia nihinana ary nampisotroin-drano, 12norosoana ampempan'aviavy maina iray didy, sy voaloboka maina roa takelaka. Nony efa nihinana izy, dia nody ny ainy, fa hateloan'andro sy hateloan'alina izy, tsy nihinan-kanina na nisotro rano. 13Hoy Davida taminy: An'iza hianao, ary avy aiza? ka hoy ny navaliny: Andevo Ejipsiana lasan-ko mpanompon'ny Amalesita anankiray aho, saingy narary, ka narian'ny tompoko, efa hateloana izay. 14Nanafika ny Negeban'ny Keretiana sy ny faritanin'i Jodà mbamin'ny Negeban'i Kaleba izahay, ary nodoranay Sikelega. 15Dia hoy Davida taminy: Manaiky hitarika ahy ho any amin'izany jirika izany va hianao? Ary hoy ny navaliny: Mianiàna amiko amin'Andriamanitra fa tsy hamono ahy hianao, na hanolotra ahy eo an-tànan'ny tompoko, dia hitarika anao ho any amin'izany jrika izany aho. 16Nony nitarika azy izy, dia indreo ny Amalesita, miely eran'ny tany, mihinana sy misotro, ary mandihy, fa nahazo babo betsaka tamin'ny tanin'ny Filistina sy ny tanin'i Jodà. 17Nasian'i Davida izy ireo, hatramin'ny takarivan'izay ka hatramin'ny ampitso hariva, tsy nisy afa-nandositra afa-tsy zatovo efa-jato lahy izay nitaingin-drameva, dia nitsoaka. 18Ka azon'i Davida indray izay rehetra voababon'ny Amalesita, ny vadiny roa voavonjy. 19Ny olony, tsy nisy tsy azon'izyz ireo, na kely na lehibe, na azanay lahy na zanany vavy, na ny zavatra, na inona na inona nalaina taminy: dia nentin'i Davida nody avokoa izany. 20Koa nalain'i Davida ny biby fiompy na ny madinika na ny vaventy; dia nandeha teo alohan'izany andiam-biby fiompy izany izy ireo nanao hoe: Itony no babon'i Davida.
21Niverina Davida nankany amin'izy roan-jato lahy izay reraka loatra ka tsy afa-nanaraka an'i Davida ka najanona tao amin'ny ranon-driaka Besora, dia nitsena an'i Davida sy ny vahoaka izay niaraka taminy izy ireo. Nanatona azy ireo Davida dia niarahaba azy tamim-pitiavana. 22Fa rehefa mety ho lehilahy sompatra sy faikany tamin'ny olona niaraka tamin'i Davida dia niteny kosa nanao hoe: Satria tsy mba tafaraka tamintsika ireo dia tsy mba omentsika amin'ny babo azontsika afa-tsy ny vady aman-janany isany avy ihany; ka aoka ho entiny izany ary handeha any izy. 23Nefa hoy kosa Davida: Aza manao toy izany, ry rahalahy, amin'ny zavatra nomen'ny Tompo antsika, satria niaro antsika izy sy nanolotra eo an-tànantsika ny jirika tonga hamely antsika. 24Ka iza no hanaiky anareo amin'izany raharaha izany? Tsy maintsy atao sahala ny anjaran'izay nidina hiady, sy ny an'izany nijanona tamin'ny entana: hiara-mizara daholo. 25Dia natao araka izany hatramin'izay andro izay ka aty aoriana, dia nataon'i Davida lalàna sy fitsipika izany mandrak'androany.
26Nony tafaverina tany Sikelega Davida dia nampanaterany ho an'ny loholon'i Jodà, sakaizany, ny babo azony, nataony hoe: Iny fanatitra ho anareo, avy amin'ny babo azo tamin'ny fahavalon'ny Tompo; 27dia ho an'ny ao Betela, an'ny ao Ramotan'ny Negeba, an'ny ao Jetera, 28an'ny ao Aroera, an'ny ao Sefamota, an'ny ao Estamao, 29an'ny ao Rakola, an'ireo ao amin'ny tanànan'ny Jerameelita, an'ireo ao amin'ny tanànan'ny Kineana, 30an'ny ao Arama, an'ny ao Kora-Asana, an'ny ao Ataka, 31an'ny ao Hebrona, ary ho an'ny any amin'ny tany rehetra nalehan'i Davida sy ny olony. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0224 seconds